အကြမ်းဖက် ARSA ဇစ်မြစ်
In this photograph taken on October 9, 2016,aman suspected of being one of the attackers in recent border raids is taken toapolice station in Sittwe, capital of the Rakhine state. Myanmar's army on October 10 hunted the attackers who staged deadly raids on border posts, searching homes in Rakhine state for stolen weapons, as police said four people were killed in one clash. / AFP PHOTO / STRINGER
ဘေးကအသံတွေက ဖုန်းထဲက စကားပြော သံကို လွှမ်းသွားသည်။ ARSA (အာရကန် ရိုဟင်ဂျာကယ်တင်ရေးတပ်)မှ ဟရှန်က ‘နိုး၊ နိုး၊ နိုး၊ နိုး’ ဟု ခပ်လောလော ပြောလိုက် သည်။ သူ့အဖွဲ့အနေဖြင့် အစိုးရသတင်းပေးများ ကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း၊ သို့သော် သူတို့ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်း သူက ဆိုသည်။
‘ဟုတ်တယ်။ တစ်ခါတလေ ကျွန်တော်တို့ သူတို့ကို အတင်းဖမ်းခေါ်သွားတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ လေးငါးရက်ထားတယ်။ သူတို့ကို စိတ်အားတက်ကြွအောင် လုပ်နေတာ ပါ’ ဟု ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်း တစ်ခုကနေ သူကစကားပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။
အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် ဟက်ဆန်သည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများ လုပ်နေသော ARSA မှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ် သည်။
ယခုအခါတွင် ရခိုင်ဒေသမှာ သွားလာရ ခက်ခဲပြီး ယုံကြည်လောက်သော အချက်အ လက်များ ရရှိရေးမှာ လွန်စွာခက်ခဲနေသည်။ သို့သော် မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရှိ လေ့လာသုံး သပ်သူများ၊ အကူအညီပေးရေး အလုပ်သမား များနှင့် သံတမန်များကို မေးမြန်းပြီးသည့်အခါ တွင်တော့ ဒေသခံများ၏ မကျေနပ်မှုများ၊ ကြောက်ရွံ့မှုများကို အသုံးချလျက် နှစ်ပေါင်းအ တော်ကြာ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် စိမ့်ဝင်ထိုးဖောက် ထားသော အဆိုပါအဖွဲ့၏ လုပ်ဆောင်မှုများကို ပုံဖော်၍ ရသွားသည်။
သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် သေနတ်များ၊ တုတ်များ၊ လက်လုပ်ဗုံးများ ကိုင်ထားသော အ ကြမ်းဖက်သူများသည် ရဲစခန်းများကိုဝင်ရောက် စီးနင်း တိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၂ ဦး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ARSA အဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်တွေလည်း အသေအဆုံး ရှိပြီး ယခုအခါတွင် ရာဂဏန်းကျော်နေပြီ ဖြစ် သည်။
ထို့နောက်တွင် ကမ္ဘာက ရိုဟင်ဂျာဟု သတ်မှတ်နေကြသော ဘင်္ဂါလီပေါင်း သောင်းချီ ကာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်သို့ ထွက်ပြေးနေကြ သည်။ ‘အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်သူတွေက မိန်းမ တွေကိုပဲ ပေးသွားပြီး၊ ယောကျ်ားတွေကို ပေးမ သွားဘူး။ နယ်စပ်ဖြတ်တာနဲ့ သတ်ပစ်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်တယ်’ဟု မောင်းတောမြို့နယ်မှ အမျိုးသားတစ်ဦးက Fortify Rights အဖွဲ့သို့ ပြောသည်။ ထွက်ပြေးလာကြသူများက မြန်မာ့တပ်မ တော်က ၎င်းတို့ကို ရက်ရက်စက်စက် ဆက်ဆံ ကြကြောင်း၊ ရွာများကို မီးရှို့ကြကြောင်း၊ အဖြူ အမဲမခွဲဘဲ သေနတ်နှင့်ပစ်ကြောင်း စွပ်စွဲပြော ဆိုကြသည်။ အစိုးရကတော့ အကြမ်းဖက်သမားများ ကို တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ရာတွင် တရားဥပဒေအတိုင်း သား တိုက်ခိုက်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
‘လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုရင် အဲဒီမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ် လုံလုံလောက်လောက် မရှိ ပါဘူး။ ဒါကြောင့် တပ်မတော်က လုံခြုံရေးအ တွက် အကူအညီပေးနေတာပါ’ ဟု လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးက ပြောသည်။
တစ်ဖက်တွင်တော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဒုက္ခ သည်စခန်းများမှ ဘင်္ဂါလီများသည် ဒုက္ခသည်စ ခန်းများမှခိုးထွက်ကာ မြန်မာနိုင်ငံထဲသို့ ပြန်ဝင် ပြီး ARSA အဖွဲ့ဝင်ကာ လက်နက်ကိုင်တိုက် ခိုက်မှုများ လုပ်နေကြောင်း ဒေသခံသတင်း များနှင့် အမည်မဖော်လိုသော အနောက်တိုင်းအ ရာရှိတစ်ဦးက ဆိုသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစိုးရကတော့ အဆိုပါအဖွဲ့ကို ‘အစွန်းရောက် ဘင်္ဂါလီ အကြမ်း ဖက်သမားများ’ ဟု ကင်ပွန်းတပ်ပြီး ၎င်းတို့သည် အရပ်သားများကို သတ်ဖြတ်မှုများ ပြုလုပ်နေ ကြောင်းစွပ်စွဲထားသည်။ သမ္မတ၏ ပြောရေးဆို ခွင့်ရှိသူကို ဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်း ဆက်သွယ် ၍ မရခဲ့ပေ။ ARSA အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်သူများက တော့ ၎င်းတို့အနေဖြင့် လွတ်လပ်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့၏ တိုက် ခိုက်မှုမှာ ဘင်္ဂါလီများ၏ အခွင့်အရေးအတွက် ‘တရားဝင်သော ခြေလှမ်းဖြစ်သည်’ ဟု တွစ် တာမှတစ်ဆင့် ထုတ်ပြန်သည်။
ဘင်္ဂါလီများမှာ ကမ္ဘာတွင် အကြီးမားဆုံး သော နိုင်ငံမဲ့များဖြစ်ကြောင်း မကြာသေးခင်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ကိုဖီအာနန် ဦးဆောင်သော အကြံပေးကော်မရှင်၏ အဆုံးသတ် အစီရင်ခံစာ ထဲတွင် ဖော်ပြထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်သူ များကတော့ ၎င်းတို့မှာ တရားမဝင်ခိုးဝင်လာ သူများသာဖြစ်သည်ဟုမြင်ကြပြီး ၎င်းတို့ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့် မပြုပေ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဘာသာရေးပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားပြီးနောက်တွင် ဘင်္ဂါလီထောင်ပေါင်းများ စွာသည် ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် နေထိုင်နေရ သည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကတော့ ၎င်းတို့ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအတွက် လုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက် မှုတစ်ရပ်အဖြစ်မြင်ပြီး ဒုက္ခသည်ထပ်ပြီး လက်ခံ လိုသည့် အနေအထားမရှိပေ။ ရဲစခန်းများ တိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာ ကိုဖီအာနန် ကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာနှင့် အကြံပြုချက်များ ထုတ်ပြန်သည့်နေ့မှာပင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ် သည်။
‘သူတို့ရှိနေတာ၊ သူတို့ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေ၊ တပ်မတော်အပေါ် သူတို့ရဲ့ ရန်လိုမှုတွေအရ ပြီးခဲ့တဲ့ ကိုးလလုံးလုံး သူတို့ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်ရေးကို ခြိမ်းခြောက်နေသူ တွေဖြစ် တယ်’ ဟု ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတွင်နေ ထိုင်အလုပ်လုပ်နေသူ မြန်မာအခြေစိုက် အကြံ ပေး ဂါဘရီယာအေရွန်က ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ ကျေးရွာများ နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများမှလူ များကို တပ်သားစုစောင်းမှုမှာ ၂၀၁၆ အောက် တိုဘာတွင် အကြမ်းဖက်သမားများက မောင် တောမြို့နယ်ရှိရဲစခန်းများကိုတိုက်ခိုက်ပြီးနောက် တွင် ဆက်တိုက်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဗီဒီယိုများထဲတွင်ပါသော ARSA အဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင် အတောလာ အဘူအမ်မာ ဂျူနူနီ မှာ ချစ်ခင်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသူ တစ်ယောက် ဖြစ်သည်။
ပညာတတ် အလယ်အလတ်ကျတဲ့ ဘင်္ဂါ လီတစ်ယောက်ကပြောတယ် ‘သူစကားပြောတဲ့ ဗီဒီယိုကြည့်ပြီး မျက်ရည်ကျမိတယ်တဲ့’ ဟု ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော INGO အဖွဲ့တစ်ခုမှ အမည်မဖော်လိုသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ဟရှန်ကတော့ မောင်တောရှိ သူနေထိုင် ရာကျေးရွာမှ လူကြီးများ၏တိုက်တွန်းမှုကြောင့် ARSA အဖွဲ့ထဲသို့ ဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆို သည်။
‘ဒါက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လျှို့ဝှက်လုပ်တဲ့ဟာ တွေပါ။ တစ်ခါတလေ ကျွန်တော်တို့အစည်း အဝေးတွေလုပ်ကြတယ်။ တစ်ခါတလေ ဖုန်းတွေ ကနေ အဆက်အသွယ်လုပ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် လူစုဖို့ခက်ခဲတယ်’ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
‘လူကြီးတွေက ကျွန်တော့်ကိုပြောတယ်။ ‘ရခိုင်က ငါ့တို့တိုင်းပြည်ရယ်။ ငါတို့တိုင်းပြည်ကို ဂရုစိုက်ရမယ်။ ဒါငါတို့နိုင်ငံပဲတဲ့’ ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ဟရှန်လိုပင် အဖွဲ့ထဲသို့ လိုလိုချင်ချင် ဝင်ခဲ့ သူများရှိသကဲ့သို့ ARSA အဖွဲ့ထဲသို့ အတင်း ဝင်ခိုင်းခံရမှုများရှိနေသည်ဟု ဒေသခံများထံမှ တိုင်ကြားမှုများရှိကြောင်း မစ္စတာအေရွန်က ပြောသည်။ ‘နှစ်မျိုးရှိတယ်။ တစ်မျိုးကတော့ လိုလို လားလားဝင်ကြတဲ့လူတွေ။ နောက်တစ်မျိုးက တော့ ပညာတတ် အလယ်အလတ်ကျတဲ့သူတွေ။ မိသားစုအတွက်၊ ကိုယ့်အတွက် စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့ နေသူတွေ’ ဟု အမည်မဖော်လိုသော NGO ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ပြောသည်။
ဖိနှိပ်မှုများကြောင့် ဘင်္ဂါလီပေါင်း တစ် သန်းခန့် နိုင်ငံထဲမှ ထွက်ပြေးခဲ့ရပြီး ငါးသိန်းခန့် မှာ ပါကစ္စတန်နှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျတွင် ရှိနေ သည်ဟုဆိုသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က International Crisis Group က ထုတ် ပြန်သော အစီရင်ခံစာထဲတွင် ARSA အဖွဲ့မှာ မက္ကာနှင့် မက်ဒီနာရှိဘင်္ဂါလီများက ညွှန်ကြား နေပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်မှလူများက လုပ်ဆောင်နေ သည်ဟု ဆိုသည်။
ဘင်္ဂါလီများ၏ တိုက်ခိုက်မှုမှာ ၁၉၄၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်တွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဖူးပြီး အကွဲအပြဲ များရှိဖူးသည်။ လေ့လာသုံးသပ်သူများကတော့ ARSA တွင် အဖွဲ့ခွဲများရှိမည်ဟု ယူဆကြသည်။ ဟရှန်ကလည်း ၎င်းတို့တွင် ခေါင်းဆောင်များစွာ နှင့် အုပ်စုများစွာရှိကြောင်းပြောဆိုရာ လေ့လာ သုံးသပ်သူများ၏ ယူဆချက်ကမှန်ကန်သည်ဟု ဆိုရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် လများအတွင်းကတော့ အဆို ပါအဖွဲ့သည် အစိုးရကို သတင်းပေးသည်ဟု သံသယရှိသော ဘင်္ဂါလီကျေးရွာအကြီးအကဲများ၊ အကြမ်းဖက်မှုကို ဆန့်ကျင်သူများကို သတ်ဖြတ် ခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ သည်ဟု အစိုးရကဆိုသည်။ လူတစ်ဦးကို သတ်ဖြတ်မည်ဟု အဆိုပါအဖွဲ့အမည် ဖြင့် ခြိမ်းခြောက်နေသော ဗီဒီယိုတစ်ခုကို The Guardian အနေဖြင့် ကြည့်ရှုခဲ့ပါသည်။ ထို့အ တူ ယင်းအဖွဲ့ဝင်ဆိုသူတစ်ဦးကလည်း ဓားရှည် ကိုကိုင်လျက် လူငယ်လေးတစ်ဦးကို ခြိမ်းခြောက် နေသော ဗီဒီယိုကို တွေ့မြင်ရပါသည်။
မြန်မာအာဏာပိုင်များကတော့ ၎င်းတို့ကို အစ္စလာမ်အစွန်းရောက်များဟု ပုံဖော်ပါသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့အဖွဲ့သည် ဘာသာရေးအခြေခံ သည်ဟုပြောဆိုရန် အထောက်အထားများစွာ မတွေ့ရပါ။ သို့သော် ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်၊ ပြောဆိုနေမှု များတွင်တော့ ဘာသာရေးကို ဦးစားပေးသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ARSA အဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြည်ပ ရောက်ဘင်္ဂါလီများ၊ ဒေသခံများနှင့် အင်တာဗျူး လျက်ထုတ်ပြန်သော Crisis Group ၏ အစီရင်ခံစာထဲတွင်တော့ အစ္စလာမ်ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များသည် အကြမ်းဖက်လေကျင့် ရေးသင်တန်းများသို့ လာရောက်ကောင်းချီးပေး ခြင်းများ၊ ဘာသာရေးအရ အသိအမှတ်ပြုပေး ခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
‘အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ မလေးရှားက အစွန်း ရောက်တွေက မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ သူတို့ရဲ့ညီ အစ်ကိုတွေကို သွားကူမယ်တကဲကဲ လုပ်နေကြ တယ်’ ဟု ဂျကာတာအခြေစိုက် ပဋိပက္ခလေ့လာ ရေးပေါ်လစီသိပ္ပံမှာဒါရိုက်တာ ဆစ်ဒနီဂျုံးကဆို သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာပင် ရွာထဲ၊ ဒုက္ခသည်စခန်း ထဲမှာ အပြင်ထွက်ခွင့်မရသောဘဝတွင် နေနေ ရသည်မှာ အသက်ရှင်နေသည်နှင့် မတူကြောင်း လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူများနှင့် ဂျာနယ်လစ် များကို ဘင်္ဂါလီများကမကြာခဏပြောနေကြသည်။
‘အခု ကျွန်တော်တို့ မသေသေးဘူး။ ဒါပေ မယ့် အသက်ရှင်နေတာနဲ့လည်း မတူဘူး။ ဒီ တော့ ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခု လုပ်ဖို့လိုတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အခွင့်အရေးလိုချင်တယ်။ အဲဒီလို မဖြစ်ဘူးဆိုရင် သူတို့ပဲ သေသေ၊ ကျွန်တော် တို့ပဲ သေသေပဲ’ဟု ဟရှန်ကဆိုသည်။
Written by – မင်းသူအောင်
Source: ‘We die or they die’: Rohingya insurgency sparks fresh violence in Myanmar by Poppy McPherson/The Guardian
နောက်ထပ်ဆောင်းပါးစအိုထဲမှာ ဖန်ခွက်ဝင်နေတဲ အမျိုးသား